Ny fifaliana eo amin'ny fitaizana (Sal. 127)
Vakio ny Sal. 127. Inona no hafatra fototra hita ao amin'io Salamo io? Inona no fitsipika manan-danja ampianarin'izany antsika ny amin'ny tokony ho fomba fiainantsika?
Firy aminareo no tia mahandro sakafo? Mety manana nahandro izay tianao tokoa ianao, ka fantatrao fa zava-dehibe ny fanarahana izay lazain'ny torohevitra momba izany nahandro izany. Voalohany, ilainao ny manana ireo fangaro rehetra amin'izany, avy eo dia tsy maintsy arahinao ny toromarika rehetra. Raha atao ireo zavatra roa ireo dia mety tokoa izany nahandro izany an-kapobeny. Tsy tahaka ny fahandroan-tsakafo anefa ny fahaizana mitaiza, tsy misy ny "fomba fanao" ho amin'izany. Tsy hitovy tanteraka mihitsy ny zaza roa na dia notezainao tamin'ny fomba iray ihany aza; mety hiova ny zaza tsirairay. Inona moa no drafitr'Andriamanitra ho an'ny zanaka hatramin'ny nahaterahan'izy ireo? Iriny ny hampianaran'ny ray aman-dreny ny ankizy ho tia sy hankato Azy (Deo. 6:4-9; Sal. 78:5-7). Izao no baikon'Andriamanitra: "Zaro amin'izay lalana tokony halehany ny zaza, ka na rehefa antitra aza izy, dia tsy hiala amin'izany."- Ohab. 22:6. Tsy midika izany fa tsy maintsy hiaraka amin'ny zanany amin'ny fotoana rehetra ny ray aman-dreny mba tsy hanaovan'izy ireo fahadisoana!
Tiantsika ny zanatsika raha mitombo avy amin'ny zazakely mahafatifaty ho amin'ny olon-dehibe tsara toetra mahalala sy tia an'i Jesôsy ary manompo Azy. Azontsika arahina ny drafitra manokana nataon'Andriamanitra ho an'ireo zanatsika ao amin'ny Deo. 6, amin'ny maha-ray aman-dreny antsika. Hanampy ireo zanatsika amin'ny fitomboany ho tonga olon-dehibe mahery ara-panahy izany drafitra izany. Zavatra manan-danja efatra anefa no tokony hataontsika mialoha ny hanarahana izany: (1) mandray an'i Jesôsy ho "Jehôvah Andriamanitsika" - Deo. 6:4; (2) mitia Azy amin'ny fontsika rehetra (Deo. 6:5); (3) manaiky ny Baiboly amin'ny maha-tenin'Andriamanitra azy (Deo. 6:6); (4) mizara amin'ireo zanatsika izay fantatsika momba an'i Jesôsy (Deo. 6:20-23).
Manome fitsipika manan-danja anankiroa fanampiny ny Deo. 6. Voalohany amin'izany ny fitsipika "ampianaro-resaho" (Deo. 6:7). Amin'ny fotoam-bavaka ataon'ny ankohonana no anaovana ny fampianarana, rehefa miara-mianatra Baiboly amin'ireo zanatsika isika. Eo amin'ny fiainana andavanandro kosa no iresahantsika amin'izy ireo ny zavatra hitantsika isan'andro, ohatra izay ampiasaintsika hampianarana azy ireo ny fahamarinan'ny Baiboly (Gen. 18:19). Ny fitsipika faharoa dia ny "fehezo-soraty" (Deo. 6:8,9). Tokony hifandray akaiky amin'izay atao sy sainintsika ny fahamarinana ara-panahy. Tokony "hosoratana" eo amin'ireo "varavaran"ny fiainantsika koa izany mba ho hitan'ny rehetra.